FADEEXAD: Waxay naga taabtaabsadeen naasaha iyo dabadda! Fanaanad la wareestay - iftineducation.com
FADEEXAD: Waxay naga taabtaabsadeen naasaha iyo dabadda! Fanaanad la wareestay
aadan21 / February 21, 2016
iftineducation.com – Wargeyska Expressen ayaa soo bandhigay macluumaad muujinaya in Booliska Sweden ay shacabka ka qariyeen dhacdooyin foolxun oo dhalinyaro soo galooti ah ay kula keceen gabdho Swedish ah xili ay socotay xaflad musik. Arintaan ayaa dhacday sanadkii 2015/2016 taasoo ka dhacday xaflad lagu magacaabo “We are Stockholm”.
Wargeyska ayaa cadeeyay in dhalinyaro soo galooti ah oo uu badan kuwo u dhashay wadanka Afghanistan ee wadanka ku jooga caruurnimada ay gabdhaha ku sameeyeen fara-xumayn isugu jidha taataabasho iyo dhac. Gabdhaha yaryar oo qaarkood ay da’dooda gaarayso 15 sano ayaa sheegay in ay waayeen meel ay u cararaan ka markii ay isku wareejiyeen dhalinyaradaan oo naasaha iyo dabada ka taabtay, halka qaar kale markii ay dhulka ku dheceen ay wiilashaan dusha ka fuuleen.
Arintaan ayaa imaanaysa ka dib markii ay isbuucii la soo dhaafay soo baxday fadeexad weyn oo ka dhacday dabaal-deggii sanadka cusub meelo badan oo ka tirsan Yurub, iyadoo qaasatan wadanka Germany magaalada Köln ay ka dhacday fadeexad weyn oo dumar gaaraya 500 qof lagu faraxumeeyay, arintaas ayaa lagu eedeeyay ajaanibta wadanka dhawaan soo gashay ee magangalyo doonka ah. Hadda ayaa jansilarka Germany Angela Merkel ay sheegtay in ay wadanka ka musaafurin doonaan cidii lagu helo dambiyadaas.
Maadaama ay arin taasi la mid ah mida ka dhacday Sweden isla markaana ay boolisku ka qariyeen saxaafada iyo shacabka ayaa ah mid walwal abuureysa isla markaana shidaal u noqonaysa ololaha cunsuriyiinta ee ka dhanka ah soo galootiga.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa bilaabay in ay ku andacoodaan in dadka soo galootiga ah, ee qaasatan ka imaanaya wadamada Muslimiinta aysan aqoonin sida loola dhaqmo dumarka isla markaana ay u baahanyihiin in la siiyo koorsooyin ku saabsan xuquuqda dumarka iwm.
In dad qaxooti ah oo wadanka ku jooga caruurnimo, isla markaana la siiyay daryeel wanaagsan ay ku kacaan falalka nuucaan ah ayaa ah mid aan la aqbali karin isla markaana fadeexad ku ah guud ahaan soo galootiga.
Ogow Ninyahow: Dumarku Ma Jecla in xubinta taranka raggu (ANACONDA) Oo kale Noqoto Midna Maskaxdaada ku hayso inaysan bahalka dheer jeclayn
Vedio Fadeexad ah: Gabar Soomaaliyeed oo Banaanada Yurub ragga dibka u dhibanaayo